Ngokusho kwe-Association of Internet Trade Companies (AKIT), imakethe yokuthengisa online kwiRussian Federation engxenyeni yokuqala ka-2020 yaba ama-ruble ayi-1,654 trillion. Ngokusho kukamongameli we-AKIT, u-Artem Sokolov, ukuthuthukiswa kwe-e-commerce sekungomunye wemikhuba ephambili kwezentengiso, ngoba i-Intanethi ibe ukuphela kwesiteshi sokuthengisa sezigaba eziningi zemikhiqizo.
"Ngokwemiphumela yesigamu sokuqala salo nyaka, i-e-commerce icishe yaphindeka kabili engxenyeni yokuqala yonyaka odlule, okungukuthi, imakethe isiphindaphindeke kabili uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, nemingcele efanayo," kusho u-Artyom Sokolov engqungqutheleni yamabhizinisi okudayisa iWorld Retail Russia 2020.
Imakethe ye-e-commerce ikhombise ukukhula okubukhali ngoMashi, ivolumu inyuke izikhathi ezingaphezu kwesisodwa nengxenye uma iqhathaniswa noFebhuwari, isuka kuma-ruble angama-205,8 billion aya kuma-ruble angama-316,3 billion. Ngo-Ephreli, uma kuqhathaniswa nezinkomba zikaMashi, imakethe ikhombise ukukhula okungeziwe nge-9,5% futhi yafinyelela kuma-ruble angama-346,1 billion. Kodwa-ke, ivolumu ye-e-commerce yehlile njengoba izwe lishiya ukuhlukaniswa. NgoMeyi kuqhathaniswa no-Ephreli - ngo-9,3% (kuya kuma-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-313,9), ngoJuni uma kuqhathaniswa noMeyi - ngo-11,4% (kuya kuma-ruble angama-277,9 billion).
“Izinyanga ezintathu okukhona kuzo i-COVID zibe nomthelela omubi ekuphendukeni kwemali emakethe isiyonke. Lokhu kuholele ekutheni sesifinyelele enkomba yomlando: umthamo we-e-commerce engxenyeni yokuqala yalo nyaka ezweni lethu wedlula u-10% wentengo ephelele yokuthengisa. Asikaze sibe nenkomba enjalo empilweni yethu, ”kusho umengameli we-AKIT.
Kodwa-ke, ngenkathi imakethe yaseRussia isilela emuva ngemuva kweChina, isabelo se-e-commerce sikhona ngama-29,9%. Kepha imakethe yokuhweba online yeRussian Federation isivele isondele e-United States (13,9%)
Imininingwane yenhlangano ikhombise ukuthi okokugqoka nezicathulo (ama-30,2% emakethe yasendaweni) kube yisigaba esikhulu kunazo zonke emakethe ye-e-commerce, ngaphambi kwemishini yedijithali neyasendlini (29,5%). Endaweni yesithathu ukudayiswa kokudla online, isabelo saso sifinyelele ku-14,1%.
“Bekuwumkhuba obekungenakwenzeka ukuthi uphuthelwe wona. Ngosuku lokuqala nje, lapho uMongameli wezwe lethu ememezela ukuthi silindwe yisonto "lezinsuku zokuphumula", inani lama-oda ezinsizakalweni eziningi zokulethwa kokudla lenyuke kahlanu, amahlandla ayishumi. Abanye babo babene-quota "ebiza ngokweqile" kangangoba, ngokwesimo esithile, i-oda elilandelayo belingalethwa kuphela ngesonto nohhafu, "kungeza u-Artem Sokolov.
I-AKIT ibikezela ukuthi ekupheleni konyaka, imakethe yase-e-commerce yaseRussia izobe ifinyelela kuma-ruble angu-2,933 trillion. Ngonyaka odlule, imakethe ye-e-commerce, ngokusho kukasoseshini, yaba ngu-2,032 trillion ruble.
Tags: imakethe yokuthengisa online